သင်ဟာ COC က ဘယ်ကောင်လေးနဲ့ တူပါသလဲ ? | Buzzy
သင်ဟာ COC က ဘယ်ကောင်လေးနဲ့ တူပါသလဲ ?
အောက်ပါမေးခွန်းတွေကို ဖြေပြီး သင်ဟာ COC ထဲက ဘယ်သူနဲ့ တူသလည်းဆိုတာ ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်ပါ ။ သင်ဟာ Archer လား ? Dragon လား စသဖြင့်ကို တွက်ကြည့်လိုက်ပါဦး ၊ မေးခွန်းတွေကို ဆုံးတဲ့ထိ ဖြေပေးပြီးရင် ရလဒ်ကိုဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။
သင့်စိတ်ထဲ ဘယ်ကလေးက ချစ်ဖို့ အကောင်းဆုံးလို့ ထင်ပါသလဲ ?
ဘယ်တိရိစ္ဆာန်လေးတွေကရော ချစ်စရာအကောင်းဆုံးလို့ ထင်ပါသလဲ
သင်က ဒီရက်မှာ မွေးဖွားတာ
သင်အဓိကဆော့တဲ့ COC အကောင့် Level က
Level 31 - 45
Level 76 - Level 90
Level 106 အထက်
Level 91- 105
You got: Barbarian
သင်ဟာ သာမန်နေထိုင်မှု ပုံစံနဲ့ လူထဲက လူတစ်ဦးပါပဲ ၊ သင်ဘဝဟာ ထူးထူးခြားခြား မရှိပဲ ပုံမှန်အသက်ရှင် ရုန်းကန်ရင်းပဲ နေထိုင်သွားနိုင်ဖို့ပဲ စိတ်ဝင်စားသူတစ်ဦးပါ။
You got: Archer
သင်ဟာ သင်လုပ်ဆောင်စရာ ရှိတာကို အောင်မြင်တဲ့အထိ အာရုံစူးစိုက်ပြီး လုပ်ကိုင်လေ့ ရှိသူတစ်ဦးပါ ။ သင့်ကိုယ်စွမ်း ဥာဏ်စွမ်းရှိသရွေ့ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်တက်ကာ တစ်ကိုယ်ကောင်း စိတ်ထားမျိုးမရှိပဲ အများနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ၊ ကောင်းမှုဆိုးမှုကိုလည်း မျှဝေခံစားတက်သူ တစ်ဦးပါ။
You got: Goblin
သင့်ခေါင်းထဲမှာ အမြဲတမ်း ငွေ ငွေ ငွေ ဆိုပြီးဖြစ်နေပေမယ့် ငွေတွေရလာတဲ့အခါမှာလည်း သင်ကိုယ်တိုင်ထက် ပတ်ဝန်းကျင် ကောင်းရာကောင်းကျိုးအတွက်သာ အသုံးချတက်သူပါ။ သင်ဟာ ကိုယ်လိုချင်တာကိုပဲ သိပြီး ကိုယ့်အန္တရယ်ကိုတော့ မမြင်တက်တာမို့ တစ်ခါတစ်လေမှာ ဆိုးရွားလွန်းတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရလေ့ ရှိပါတယ်။
You got: Giant
သင်ဟာ ဘယ်လောက်ဆိုးဝါးတဲ့ အခက်အခဲကိုဖြစ်ဖြစ် ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ဖို့ အမြဲအသင့်ဖြစ်နေပြီး ၊ အောင်မြင်မှုရရှိဖို့ ဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးကိုမဆို ရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
You got: Balloon
သင်ဟာ သင့်ရဲ.ငယ်ရွယ်မှုမာန်နဲ့ သင်လုပ်ချင်တာကို တစ်ဇွတ်ထိုးလုပ်တက်တာမို့ သင့်ကိုသင်ထိခိုက်စေမှုတွေ အမှန်ပဲ ရှိပါတယ် ။ တစ်ချို.က သင့်ကို ဘာကိုမှ သတိမထားပဲ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တက်သူလို့ ထင်ပေမယ့် တကယ်တော့ သင့်မှာ သင်အဓိကထား လုပ်ဆောင်လိုတာတွေ ရှိပြီး အဲ့ဒီအရာတွေကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်လေ့ရှိပါတယ် ၊ တစ်ခါတစ်လေတော့ အရှုံးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတက်တာပေါ့ ။
သင်ဟာ ထူးဆန်းအံသြဖွယ်ကောင်းတဲ့ လူသားတစ်ယောက် ဖြစ်ပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေရှိအောင် နေထိုင်တက်သူပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း သင့်ရဲ. တူမတူအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းကပဲ သင့်ကို အထီးကျန်သူ လူသားတစ်ဦး ဖြစ်လာစေပါတယ် ။ သင့်ရဲ. ထူးခြားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကနေ သင့်အသိုင်းအဝိုင်းကို အောင်မြင်မှုတွေ ယူဆောင်ပေးလေ့ ရှိပါတယ်။
You got: Healer
သင်ဟာ တကယ်ကို စိတ်ကောင်းစေတနာအလွန်ရှိပြီး သူတစ်ဖက်သားကို ကူညီတက်သူပါ ။ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး သူတစ်ပါးရဲ. အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအတွက် ဘယ်လိုကူညီရမလည်းပဲ စဉ်းစားနေသူပေါ့ ။
သင်ဟာ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သြဇာကြီးမားပြီး သင့်ပတ်ဝန်းကျင် ကောင်းရာကောင်းကြောင်းကို ဦးဆောင်မှု ပေးနိုင်သူတစ်ဦးပါ ။ သင်ဟာ လုပ်စရာရှိတာကို ဖြေးဖြေးမှန်မှန်နဲ့ လုပ်ဆောင်တက်လေ့ ရှိပြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သင့်ရဲ.အောင်မြင်မှုသတင်းဟာ မွှေးပျံနေလေ့ ရှိပါတယ် ။ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း သင့် အစဉ်းစားလွန်တာနေကြောင့် မဆိုသလောက် ဆုံးရှုံးမှုလေးတွေ ရှိတက်ပါတယ်။